Redio na Ụgbọ Mmiri Lightbearer—Ụzọ Ndị E Si Kwusaa Ozi Ọma n’Oge Mbụ
N’AFỌ 1933, ụmụnna anyị haziri ka a na-esi n’ụlọ ọrụ redio dị́ na Jakata na-akpọ okwu Nwanna Rutherford kwuru na redio n’asụsụ Bekee. Otu nwoke nwere mmasị n’eziokwu Baịbụl na-akụzi ji asụsụ Dọch gụpụta okwu ụfọdụ Nwanna Rutherford kwuru. Okwu ndị ahụ a kpọrọ na redio mere ka ọtụtụ ndị nwee mmasị ịmụ Baịbụl, meekwa ka ọtụtụ ndị nara akwụkwọ anyị ndị e ji amụ Baịbụl.
Obi gbawara ndị ụkọchukwu Katọlik mgbe Nwanna De Schumaker nyere ụlọ ọrụ redio ahụ dị́ na Jakata otu okwu Nwanna Rutherford kwuru, ha akpọọ. Isiokwu okwu ahụ bụ, “Otú Afọ Nsọ Ahụ Si Metụta Udo na Ọganihu.” * Ndị ụkọchukwu ahụ si n’aka ndị chọọchị ha gbaa Nwanna De Schumaker akwụkwọ n’ụlọikpe ma boo ya ebubo na “ọ katọrọ ha, mee ha akaja, ma kpọọ ha asị.” Nwanna De Schumaker zaara ọnụ ya n’ụlọikpe ahụ. N’agbanyeghị nke ahụ, ụlọikpe ahụ sịrị ya kwụọ ndị Katọlik guilder iri abụọ na ise * nakwa ego ndị ha mefuru n’ikpe ahụ. Ikpe ahụ gbara n’akwụkwọ akụkọ atọ a ma ama n’Indoneshia. O mekwara ka ọtụtụ ndị nụ ozi ọma.
Ụgbọ Mmiri A Na-akpọ Lightbearer
N’abalị iri na ise n’ọnwa Julaị afọ 1935, ụgbọ mmiri Watch Tower Society dị́ mita iri na isii a na-akpọ Lightbearer rutere na Jakata. O were ụgbọ mmiri a ọnwa isii isi n’obodo Sidni dị́ n’Ọstrelia rute Jakata. Ndị nọ na ya bụ ndị ọsụ ụzọ asaa ji ozi ha kpọrọ ihe. Ha kpebisiri ike izi ozi ọma n’ebe niile n’Indoneshia, Sịngapọ, nakwa na Maleshia.
Ruo ihe karịrị afọ abụọ, ndị ọsụ ụzọ ji ụgbọ mmiri a gaa n’obere ọdụ ụgbọ mmiri nakwa ná nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri e nwere n’Indoneshia kesaara ndị mmadụ ọtụtụ akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl. Nwanna Nwaanyị Jean Deschamp kwuru ihe ha na-eme n’obere ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla ha rutere. Ọ sịrị, “Anyị na-akpọnye otu n’ime okwu ndị Nwanna J. F. Rutherford kwuru. Ọ bụ ya bụ onyeisi oche Watch Tower Society n’oge ahụ.” Nwanna Nwaanyị Deschamp kwukwara, sị: “Ọ na-eju ndị bi n’ime ime obodo Malei anya ịhụ nnukwu ụgbọ mmiri na-akwụsị n’ọdụ ụgbọ mmiri ha, na ịnụ okwu ndị a kpọnyere akpọnye si na ya na-adasi ụda ike. O siri ike ịhụ ihe ọzọ ga-eme ka ha nwee mmasị ịnụ ozi ọma karịa ya.”
Ezigbo iwe were ndị ụkọchukwu maka otú ụmụnna anyị si jiri obi ike na-ekwusa ozi ọma. N’ihi ya, ha kwanyere ndị ọchịchị ọkụ n’ikè ha akwụsị ụgbọ mmiri ahụ ịbata n’ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri e nwere n’Indoneshia. Na Disemba afọ 1937, ụgbọ mmiri Lightbearer laghachiri Ọstrelia. A gaghị echefu ozi ndị ozi ala ọzọ ji ya jee n’Indoneshia.
Ebe ụmụnna anyị nọ n’ụgbọ mmiri Lightbearer
^ para. 2 Okwu a Nwanna Rutherford kwuru gbara nrụrụaka Chọọchị Katọlik na-arụrụ n’okpukpe, n’ọchịchị, nakwa n’azụmahịa n’anwụ.
^ para. 2 Guilder iri abụọ na ise bụ ihe dị ka puku naịra iri ise na ise.